အသုံးပြုနည်းမှားနေတဲ့ အလှအပပစ္စည်း (8) မျိုး
HomeKnowledgeအသုံးပြုနည်းမှားနေတဲ့ အလှအပပစ္စည်း (8) မျိုး
H August 20, 2020
အချို့အလှအပ ပစ္စည်းတွေက သင့် အသားအရေကို ဆာဟာရ သဲကန္တာရလို ခြောက်သွေ့စေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အလှအပ ပစ္စည်းတွေက မကောင်းဘူးလို့ ဆိုလိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အသုံးပြုနည်းလေးတွေကို ပြောင်းလဲပေးလိုက်ရင် အဆင်ပြေသွားပါပြီ။
1. မိတ်ကပ်ဖျက်ဆေးကို နေ့စဉ်သုံးစွဲခြင်း
သင်ဟာ မိတ်ကပ်ကို နေ့စဉ်ဖျက်တယ်ဆိုရင် ဒီအချက်ကို မေ့နေပါလိမ့်မယ်။ မိတ်ကပ်ကို တစ်ချိန်လုံး မဖျက်နိုင်ပါဘူး။ မိတ်ကပ်ဖျက်ဆေးတွေက မျက်နှာကို သေချာ မသန့်စင်ပေးပါဘူး။ မိတ်ကပ်ဖျက်ဆေးတွေက အရေပြားကို ခြောက်ကပ်စေပြီး အစင်းကြောင်းတွေ ဖြစ်စေပါတယ်။ ရေမရနိုင်တဲ့ နေရာကိုရောက်မှသာ မိတ်ကပ်ဖျက်ဆေးကို သုံးသင့်ပါတယ်။
2. Serum ကို တစ်မျိုးတည်းပဲ သုံးနိုင်တယ်လို့ထင်ခြင်း
Serum ကို ရေဓာတ်ဖြည့်ခရင်မ်မသုံးခင် လိမ်းပေးသင့်ပါတယ်။ Serum မှာ ဗီတာမင် A1 ပါဝင်ရင်တော့ ညနေဘက်မှာ သုံးပေးတာ ပိုကောင်းပါတယ်။ အဲဒီလိုဆိုရင် အရေပြားက လိုအပ်တဲ့ အာဟာရဓာတ်တွေကို စုပ်ယူနိုင်ပါတယ်။ နွေရာသီမှာ serum ကို နေပူဒဏ်ကာကွယ်တဲ့ ခရင်မ်နဲ့ တွဲသုံးရင် နေလောင်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
3. မိတ်ကပ်လိမ်းတဲ့ ဖော့အခြောက်ကို အောက်ခံမိတ်ကပ် လိမ်းပြီးမှသာ သုံးခြင်း
မိတ်ကပ်လိမ်းတဲ့ဖော့က စိုစွတ်နေဖို့ လိုပါတယ်။ မိတ်ကပ်လိမ်းတဲ့ဖော့က ခြောက်နေရင် မိတ်ကပ်တွေ အများကြီး ကပ်ပါသွားတတ်ပါတယ်။
4. Concealer နဲ့ Corrector ရဲ့ ခြားနားချက်ကို မသိခြင်း
Concealer နဲ့ corrector ကို တူတယ်လို့ အများစုက ထင်ကြပါတယ်။ Concealer ကို မျက်လုံးတစ်ဝိုက်မှာသုံးပြီး corrector ကို မျက်နှာအနာအဆာတွေ ဖုံးဖို့ သုံးပါတယ်။ သူတို့နှစ်ခုက နည်းနည်းလေး ကွဲပြားပါတယ်။ concealer သုံးတဲ့အခါ မျက်နှာကို အစိုဓာတ်ထိန်းပေးဖို့ လိုပါတယ်။ Corrector က မျက်နှာကို သဘာဝအတိုင်း လှပစေပါတယ်။
5. ဂျယ်နဲ့ မျက်နှာသစ်ဆေးကို မိတ်ကပ်ဖျက်ရန်အတွက်သာ သုံးခြင်း
မျက်နှာသစ်ဆေးကို မိတ်ကပ်ဖျက်တဲ့ အချိန်သာမကဘဲ မနက်ကော ညပါ သုံးရင် ပိုပြီး အကျိုးရှိပါတယ်။မျက်နှာသစ်ဆေးကို မနက်၊ ညသုံးခြင်းက ဆဲလ်သေတွေ၊ ဖုန်တွေ၊ ချွေးတွေကို ဖယ်ရှားပေးပါတယ်။ မျက်မှာကြေးချွတ်ဆေးတွေ သုံးတာ မကောင်းပါဘူး။
6. မျက်နှာပေါင်းတင်တဲ့ mask ကို တစ်ညလုံး အုပ်ထားခြင်း သို့မဟုတ် mask ခြောက်မှ ခွာခြင်း
မျက်နှာပေါင်းတင်တဲ့ mask ကို တစ်ညလုံး အုပ်မထားသင့်ပါဘူး။ တစ်ညလုံးထားခြင်းက မျက်နှာကို ထိခိုက်စေပါတယ်။ ချည်သားနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ mask ကို မခြောက်ခင်မှာ ခွာသင့်ပါတယ်။ မခွာရင် မျက်နှာရဲ့ အစို ဓာတ်ကိုစုပ်ယူပြီး ခြောက်သွေ့သွားစေလို့ပါ။ ရွှံံ့နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ mask က စေးကပ်ကပ်ဖြစ်လာပြီဆိုရင် ခွာသင့်ပါတယ်။
7. မျက်နှာကို အရက်ပါဝင်တဲ့ lotion ဖြင့် ပွတ်ခြင်း
မျက်နှာလိမ်းတဲ့ lotion တွေဟာ အကျိုးသက်ရောက်မှု့ခြင်း မတူပါဘူး။ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေချင်းလည်း မတူပါဘူး။ ဒါပေမယ့် lotion အများစုမှ အရက် ပါဝင်ပါတယ်။ lotion ကို မျက်နှာမှာ လိမ်းရင် အဆီ ပိုပြန်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် lotion ကို မျက်နှာမှာ မလိမ်းသင့်ပါဘူး။
8. Micellat အရည်ဖြင့် မျက်နှာမသစ်ခြင်း
Micellar က lotion နဲ့ အတော်တူပါတယ်။ မတူတာ ကတော micellar အရက် မပါဝင်တာပါ။ Micellar က မျက်နှာပေါ်က အညစ်အကြေးတွေကို ဖယ်ရှားပေးပါတယ်။